Andro mahafaty ho an'ny fizahan-tany any Kolombia sy Medellin
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kolombia » Andro mahafaty ho an'ny fizahan-tany any Kolombia sy Medellin
Jona 26, 2017
Andro nahafaty ny fizahan-tany tao Colombia. Lahatsary mampientam-po mivezivezy amin'ny tambajotra sosialy dia mampiseho sambo misy rihana marobe mihetsiketsika etsy sy eroa rehefa nidina avy tao ambony tafon'ny rihana fahatelo ny olona rehefa nanomboka nilentika ilay sambo.
"Nilentika avy hatrany ireo tao amin'ny rihana voalohany sy faharoa", hoy ny filazan'ny vehivavy iray tafatsoaka izay tsy fantatra ny anarany tamin'ny fahitalavitra teo an-toerana Teleantioquia.
“Nilentika ny sambo ary ny azonay natao dia ny nikiakiaka sy niantso vonjy.”
Margarita Moncada, lehiben'ny maso ivoho misahana ny loza voajanahary ao amin'ny fanjakan'ny Antioquia, dia nilaza fa araka ny tatitra mialoha dia olona 99 no voavonjy ary 40 hafa kosa no nahavita nitady lalana hiantsona irery ary efa tsara toetra.
Raha niresaka tamin'ny mpanao gazety avy amin'ny reservoir izy dia nilaza fa olona sivy no novonoina ary manodidina ny 28 no mbola tsy hita.
Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ilay sambo nilentika, fa kosa ireo sisa velona dia nilaza fa toa be loatra izany ka tsy nisy olona tao anaty sambo nanao akanjo lava.
Nilaza tamin'ny haino aman-jery tany an-toerana ireo tafavoaka velona fa ilay sambo, antsoina hoe El Almirante, dia toa be entana loatra ary tsy nisy mpandeha tao anatin'izy ireo nanao akanjo lava.
Lahatsary mampientam-po mivezivezy amin'ny tambajotra sosialy dia mampiseho sambo misy rihana marobe mihetsiketsika etsy sy eroa rehefa mandady avy eny ambony tafon'ny rihana fahatelo ny olona rehefa nanomboka nilentika ilay sambo.
Very hevitra ireo tompon'andraikitra nilaza mazava hoe firy ny olona tao anaty sambo ary nangataka tamin'ny mpandeha na ny olon-tiany hanao tatitra tany amin'ny tobin'ny mpamonjy voina nanangana moramora amoron-tsiraka.
Niantso ny mpitsabo scuba koa izy ireo mba hanampy amin'ny fikarohana.
Ny fitehirizan-drano manakaiky ny fiakarana be vato any El Penol dia toerana faran'ny herinandro faran'ny herinandro iray mahery kely mihoatra ny Medellin.
Nafana tokoa io asa io tamin'ny Alahady satria nankalaza faran'ny herinandro fialantsasatra lava ny Kolombiana.
Vehivavy sy Tales amin'ny endriny jiosy Ortodoksa jiosy
Ny loka World Travel Award dia mankany ANA Intercontinental Tokyo